भोलीको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल चैत्र ३१ गते मंगलवार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य « गोर्खाली खबर डटकम
गायिका शोभा कार्कीले धुरु-धुरु रुदै भनिन्:आमाको लासमाथि चढेर मैले दुध खाएँ (भिडियोसहित)
एकै दिन नेपालमा थप ८९६० मा को’रोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, २१४ जनाको मृ’त्यु
एकै दिन नेपालमा थप २१४ जनाको मृत्यु पुष्टि ,बज्यो खतराको घन्टी
यति सुन्दर परिवार थियो देख्न सकेन पापी कोरोना ले : सँधैका लागि अस्ताए वर्ल्डलिङ्क का संस्थापक विजय !
प्रिय मिना : २४ वर्ष सम्म सँगै यात्रा गरेकी तिमीलाई, समयमै उपचार नपाउँदा बचाउन सकिन् , मलाई माफ गरिदिनु !
…त्यसपछि उनलाई त्यो अवस्थामा देखेपछि मन थाम्न सकेनम….!
भोलीको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल चैत्र ३१ गते मंगलवार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ)-पारिवारिक माहोलमा दिन बित्नेहुँदा मन प्रशन्न रहनुका साथै परिवारका सदस्यहरु खुसि रहनेछन् । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त आम्दानि हुनेछ । माया प्रेमको गाठो झन कसिलो भएर जानेछ । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो)-अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुँनाले नतिजा आफैतिर ल्याउँन सकिनेछ । दिउँसोबाट समय मध्ययम रहेकोले यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला । तरपनि बिदेशी समानको व्यापारबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा)-ईच्छा,आकांक्षा तथा मनोकामना पुरा गर्न बढिनै समय मेहनेत गर्नुपर्नेछ । माया प्रेममा एक अर्कालाई अबिश्वास गर्नाले नचाहादा नचाहादै टाडिनुपर्ने बाध्यता आउँनेछ
कर्कट(ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो)-लगानि गरि व्यापार बिस्तार गर्न सकिनेछ । पति पत्नि बिचको सम्बन्ध सुदृड हुँनुको साथै माया प्रेमको गाठो गसिलो भएर जानेछ । गित संगितमा बिषेश रुचि बढ्नेछ भने पारिवारिक जमघटमा सहभागि भई मिठो मसिनो भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)-दौडधुपमा समय ब्यातित भएपनि उपलब्धि भने न्यून हुनेछ । सरकारि कामकाजमा ढिला सुस्तिको चपेटामा परिने तथा सरकारि सेवामा बसेकाहरुले समयमा काम नगर्दिनाले महत्वपुर्ण उपलब्धिहरु गुम्नेछ । समय तथा कामको तालमेल नमिल्दा काम आर्थिक रुपमा कमजोर भएको अनुभुति हुनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)-बिहानको समय राम्रो रहेकोले भौतिक सम्पति तथा विलाशी बस्तुको व्यापार गरि मनग्गे धन सम्पति जोड्न सकिनेछ । लामो दुरिको व्यापारीक यात्रा हुनेछ । पढाई लेखाईमा एक कदम अगाडि बढि सफलता हात पार्न सकिनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते)-आज गरिने सकारात्मक प्रयासहरु सफलता पुर्वक सम्पन्न हुनेछन् । थोरै स्रोत साधनको प्रयोगबाट असिमित आवस्यक्ताहरु पुरा गर्न सकिने हुँनाले मन प्रशन्न रहनेछ । उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लागानिबाट आउने आम्दानिले भबिश्यको लागि भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन जोड्न सकिनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू)-व्यापार व्यावसायला लगानि बढाई भनेजस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ । न्यायिक निकायबाट हुने निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउनेछन् । कार्यक्षेत्रमा आउने समस्याहरुलाई हल गर्ने क्षमता बढ्ने हुनाले कार्यसम्पादन मुल्याङकन सुचक बढ्नेछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे)-पढाई लेखाईमा फितलो उपस्थितिले गर्दा अरु भन्दा पछि परिने सम्भावना रहेको छ । सन्तान तथा छोराछोरिले तपाईको काममा आंशिक सहयोग गर्नेछन् । बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो क्षमता प्रदशन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने सोचेजस्तो पारिश्रमिक नपाउँदा मन खिन्न हुनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी)-बिहानको समय राम्रो रहेकोले आफ्नो रुचिको बिषयमा दिईयको समयबाट सार्थक नतिजा आउँने हुँनाले मन प्रशन्न रहनेछ । दाजुभाई,छिमेकि तथा सहयोगिहरु सँग मिलेर गरिने कुनै पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गरिएको व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा)-न्यायलयबाट हुँने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । बादबिवाद,प्रतिश्पर्धा तथा मुद्दा मामिलामा तपाईकै जित निश्चित छ । जनसम्पर्क बढ्ने तथा दाजुभाई,छिमेकिबाट भनेजस्तो सहयोग पाईने हुँनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची)-माया प्रेममा नजिक हुन सकिने तथा मिल्ने मित्रको साथ पाईने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । व्यापारमा लगानि गरि मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकोले खानपान तथा मौषमको ध्यान दिनुहोला ।
बैशाख २६ गते आईतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
भोलीको राशिफल हेर्नुहोस : वि.सं.२०७८ साल बैसाख २५ गते सनिबार । ईश्वी सन् २०२१ मार्च ०८ तारिख
बैशाख २१ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
राशिफल : २०७८ वैशाख २० गते सोमवार निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य,
आज चम्किदैछ मेष, वृष, कर्कट, कन्या, वृश्चिक, धनु र मकर राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
नयाँ भेरियन्टको को-रोना संक्रमण हुदाँ देखिने यी पाँच लक्षण, पढ्नुहाेस्
मोडेल आँशु राजबंशीको उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा अल्पायुमै दुःखद निधन !
विवाहको सात महिनापछि नेहा रोहनप्रितबीच हा’तपा’त, सामाजिक संजालमा भाइरल भयो भिडियो
खाना खाएको दुई घण्टासम्म गर्नुहुँदैन यी ६ कामहरु, नत्र क्यान्सर र मुटुरोगले सताउला